Soo dejisan Spybot - Search iyo Destroy 2.4.40.0 – Vessoft
Spybot - Search iyo Destroy
Soo dejisan Spybot - Search iyo Destroy
Spybot – Search & dumiya – software ah in la ogaado oo meesha laga saaro furin. Software wuxuu kuu ogol yahay in aad computer ka Trojans, spyware, kolkaasaa dirxi galay, oo hanjabaad kale ilaaliyo. Spybot – Search & dumiya waxay leedahay laba hababka: caadi ah in la isticmaalo hawlaha aasaasiga ah iyo ballaariyey si loo kordhiyo fursadaha markii la software ka shaqeeya. Spybot – Search & dumiya u saamaxaaya in ay dhexaadka ah ee adag disk, diiwaanka, files shaqsi, guurto files ee karantiil, updates database iwm software ayaa sidoo kale wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u xakameeyaan oo macnuhu yahay laga bilaabo boot qabtaan.
Protection ka software xaasidnimo ah
Dulmari oo ka mid ah nidaamka iyo diiwaanka
Awoodda ay u guuraan files ee karantiil
Control of boot bilaabo
Comments on Spybot - Search iyo Destroy:
Spybot - Search iyo Destroy Software la xiriira:
English, Українська, Français, Español... Avira AntiVir 15.0.15.129 Free, Pro iyo Internet
العربية, English, Français, Español... Stamina 2.5